HPF andian-tsarimihetsika an-dranomasina horizaontal plate freezer-Plate Freezer-Square Technology Group Co., Ltd.
Mametaka vatan-tsiranoka miangona
Fanamoriana vata fampangatsiahana
Famatsiam-pandriana miorina amin'ny fluide
Fizarana sy serivisy fanoloana
Mpamatsy hafanana voamboarina
Fampangatsiaka avo roa heny Freezer hozatra
Vata fampangatsiahana manangona tena
Vata fampangatsiahana fantsom-pitaovana mafy Vata fampangatsiahana fantsom-borona
Fitaovana fanamafisana ny fehikibo mesh Fitaovana fanamafisana fehikibo mafy
Vata fampangatsiahana horizaontal an-dranomasina HPF GF (J) andian-tsakafo tsy misy fatrany miaraka amin'ny vata fampangatsiahana Vata fampangatsiahana takelaka andian-tsarimihetsika GA GF WF (J) Series Plate Freezer miaraka amin'ny Unit Refrigeration WA WF andian-tsarimihetsika takelaka Vata fampangatsiahana rivotra YT-4 Ejector Fitaovana fanala mangatsiaka vita amin'ny aliminioma VPF andian-tsarimihetsika mitsivalana takelaka
Adiresy rivotra mifatotra Cooler coil roa Masaka mangatsiaka mifampitohy amin'ny valindrihana
Condenser evaporative Condenser cooled rivotra miendrika V Condenser cooled rivotra fisaka
Fampangatsiaka avo roa heny
Vata fampangatsiahana fantsom-pitaovana mafy
Vata fampangatsiahana fantsom-borona
Fitaovana fanamafisana ny fehikibo mesh
Fitaovana fanamafisana fehikibo mafy
WA WF andian-tsarimihetsika takelaka
WF (J) Series Plate Freezer miaraka amin'ny Unit Refrigeration
Vata fampangatsiahana takelaka andian-tsarimihetsika GA GF
GF (J) andian-tsakafo tsy misy fatrany miaraka amin'ny vata fampangatsiahana
Vata fampangatsiahana horizaontal an-dranomasina HPF
VPF andian-tsarimihetsika mitsivalana takelaka
Fitaovana fanala mangatsiaka vita amin'ny aliminioma
Vata fampangatsiahana rivotra
Masaka mangatsiaka mifampitohy amin'ny valindrihana
Cooler coil roa
Adiresy rivotra mifatotra
Condenser cooled rivotra miendrika V
Condenser cooled rivotra fisaka
Ity karazana vata fampangatsiahana lovia marindrano ity dia natao manokana hampiasaina an-dranomasina. Ny vata fampangatsiahana toy izany dia azo ampiasaina amin'ny fanamainam-bokatra amin'ny vokatra samy hafa ao anaty lovia, vilany ary boaty, mety amin'ny hazan-dranomasina, hena kely ary sakafo hafa ao anaty sakana.
● Azo ampiasaina na an-dranomasina na any ivelany.
● Ny frezy dia mety ho Freon, Amonia na CO2
● Namboarina tamin'ny alàlan'ny rano anaty ranomasina Aluminium, naoty sakafo. Ny takelaka alimina 25mm matevina dia manome tanjaka avo, fanoherana harafesina avo ary fitarihana hafanana. Ny takelaka dia voaforona mandeha ho azy ary manana déformation farafaharatsiny.
● Ny fonenan'ny vata fampangatsiahana kianja dia vy vy. Izy io dia afaka miantoka ny tontolo iainana masiaka sy mora diovina.
● PTFE Leak-free malefaka fantsom-pifandraisana, fifandraisana misy flanged na kofehy. Ny hosotra dia rakotra 304L kofehy vy.
Model L W H modely L W H Model L W H
Ny hatevin'ny takelaka manetona: 25mm; Ny elanelana misy eo amin'ny takelaka: 40-90mm
* Ny famaritana dia miankina amin'ny fanovana tsy misy fampandrenesana, mifandraisa amin'ny mpivarotra alohan'ny fametrahana ny filaminana.
* Ny famolavolana mirindra dia azo alaina ho takiana manokana.
●Tena mety ny manala trondro, makamba, hena, akoho amam-borona, sakafo efa vonona ao anaty lovia na boaty.
Vokatra akoho amam-borona
Prdoducts Rohy haingana
SAFE sy mahomby
Copyright © Square Technology Group Co., Ltd. ICP ： 11073309 号 -1 Filazana ara-dalàna 苏 ICP 备 11073309 号 -1